Claudine Razaimamonjy : Nalefa eny amin’ ny PAC ny dosieny -
AccueilRaharaham-pirenenaClaudine Razaimamonjy : Nalefa eny amin’ ny PAC ny dosieny
22/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mba ahafahana manohy ireo antontan-taratasy na ihany raharaha mafana sy goavana eto amin’ ny firenena, dia omaly no nisy ny fanomezana ireo antontan-taratasy izay teo am-pelatanan’ny BIANCO eny amin’ ny PAC na ny pole anti-corruption. Araka ny voalazan’ ny lalàna mifehy ny PAC izany hoe ao amin’ny andininy faha-18 araka ny lalàna laharana faha-2016-021 dia “ ny PAC dia miandraikitra ny fitsarana, fampanoavana, fanenjehana ireo tsy fanarahan-dalàna izay mifandraika amin’ ny famotsiam-bola , araka ny efa voarakitry ny lalàna iraisam-pirenena izay nanaovan’i Madagasikara sonia”. Araka izany dia ny Pac izany no handinika sy hanatanteraka fanadihadiana mikasika ilay fanodinkodinam-bola mitentina hatramin’ ny 500 tapitrisa Ariary izay nanaovana faktiora hosoka tamin’ ny fanavaozana ny tranom-panjakana etsy Antanetibe izay amin’ny anaran’ny ministeran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra. Izany raharaha izany moa raha tsiahivina dia nahatafiditra ilay mpandraharaha iray Claudine Razaimamonjy. Ankoatra izay dia misy ihany koa ireo olona ankoatra azy, izay voatonona anatin’ity raharaha ity izany, izay mbola hanatanterahan’ny PAC fanadihadiana toa ny ministra teo aloha iray, tompon’andraikitra tao amin’ ny minisiteran’ ny Vola sy ny tetibola, ary eo ihany koa ny mpandraharaha ara-toe-karena iray.
Ity fampiakarana ny antontan-taratasy ity dia porofo iray manambara fa vonona ny hiady amin’ny mety ho fanodinkodinana rehetra ny fanjakana foibe, fa tsy araka izay resaka voizina aty ivelany. Raha tsiahivina hatrany dia efa nametraka moa ny filoham-pirenena tany am-boalohany fa tsy misy velively ny famindram-po ho an’ireo izay minia manodinkodina volam-bahoaka sy fananam-bahoaka. Tsy izany ihany anefa fa efa nanambara ombieny ny filoha fa tsy hisy ihany koa izay famindram-po izay indrindra ho an’ ireo mpanao kolikoly. Porofo izay fa tsy misy ny zavatra hafenina eto amin’ ny firenena, ary fahavalon’ny rehetra ireo izay manao ny tsy mety eo amin’ ny lafin’ny kolikoly sy ny resaka famatsiam-bola. Marihina moa fa efa hatramin’ ny taona 2016 no efa maro ireo antontan-taratasy izay voarain’ ny BIANCO mikasika fitarainana fanodinkodinam-bola sy fanodinkodinana ny tsenam-baro-panjakana